तत्व सोसाइटी - शेफील्ड सबै भन्दा तेज विकास युवा युवा
हामी शेफील्डमा आधारित गैर-लाभकारी युवाहरू हो जुन युवाहरू र कमजोर वयस्कहरूलाई विकास, सामाजिक क्रियाकलाप र उद्यम कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछौं। हामी युवा जनहरूलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो समुदाय बनाउन, उनीहरूको आशिष् बढाउन र साथीहरूको लागि भूमिका मोडेल बन्न बलियो बनाउन लक्ष्य राख्छौं।
के तपाईं 15 - 17 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ र तपाईंको गर्मीको भन्दा बाहिर निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ?
उत्कृष्ट अनुभवको लागि NCS मा सामेल हुनुहोस्! नयाँ व्यक्तिहरू भेट्नुहोस्, जीवन-साथीहरू बनाउनुहोस् र तपाईंको CV को लागि नयाँ कुञ्जीहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
NCS को बारेमा थप पत्ता लगाउनुहोस्
अन्य मानिसहरूलाई अनुभवको बारेमा जान्नुहोस्
अभिभावक र संरक्षक
के तपाईंसँग छोरा वा छोरी छ, वा के तपाईं जवान व्यक्तिको हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ?
पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी 2019 NCS कार्यक्रमले उनीहरूलाई गर्मी दिन सक्छ र एक कुशलता तिनीहरूले बिर्सने छैनन्।
सोधिने प्रश्न अनुभवको बारेमा
यो तपाईं भन्दा कम सोच्नु भन्दा कम लागत
स्कूलहरू र शिक्षकहरू
के तपाईं कसैलाई जो युवाहरूसित काम गर्नुहुन्छ?
NCS कार्यक्रमले तिनीहरूलाई नयाँ अनुभवहरू कसरी सिर्जना गर्न सक्छ, कसरी नयाँ कलाहरू विकास गर्न र नयाँ, जीवन-साथी साथी बनाउन सक्छ भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
हाम्रो बारे थप जानकारी
स्थायी र मौसमी रिक्ति
हामीसँग3कोर विश्वासहरू छन्
समर्थन र आत्म विश्वासको साथ, युवाहरूले अविश्वसनीय हासिल गर्न सक्छन्
एक युवा दान को रूप मा हामी जान्दछ कि सही उपकरण, स्थान र समर्थन दिए, अविश्वसनीय प्राप्त गर्न योग्य छ।
तत्व सोसाइटीसँग अविश्वसनीय प्राप्त गर्ने केही उदाहरणहरू समावेश छन्: प्रोटोटाइप जिम थोरै, मार्केट स्टाल्सहरूमा व्यापार, कार्यशालाहरू डिजाइन गर्ने र चलाउने, धम्की र नस्लवाद विरुद्ध लड्ने, असक्षम पहुँचसँग निस्कने र यति धेरै। तपाईँलाई हड्ताल गर्ने छ कि यी आचारहरू केवल पारंपरिक 'उच्च प्राप्तकर्ताहरू' तर सबैद्वारा मात्र होइन।
युवा समुदायहरूलाई वास्तविक शक्तिको साथमा उनीहरूको समुदायमा सकारात्मक कार्य लिन
हामी निरन्तर समाजका सबै पक्षहरूलाई सुधार गर्न नयाँ परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। जवान मानिसहरू हाम्रो युवा विकासको लागी एक युवा चलनको रुपमा हो।
हाम्रो केहि परियोजनाहरु शेफील्ड र साउथ यर्कशायरका युवाहरु द्वारा डिज़ाइन गरिएको छ। हाम्रो थप परियोजनाहरू पनि जवान मानिसहरू सहभागीहरूलाई सशुल्क भूमिकामा प्रगतिमा छन्। हाम्रो सबै परियोजनाहरु मा युवाहरु लाई हरेक चरण मा अवधारणा र डिजाइन देखि वितरण र मूल्यांकन को लागी शामिल छ।
जवान व्यक्तिहरूलाई वरपरका वरिपरिका लागि सकारात्मक भूमिका मोडेल बनाउन को लागी
पहिचान गर्ने साथीहरूको भूमिका मोडेल शक्तिशाली विकासका लागी अन्य युवाहरू विकासका थुप्रै आधारभूत छन्।
जस्तै हामी भूमिका र दान मा योगदान को लागि योगदान को स्थान र अवसर प्रदान गर्दछ जहां उनि सकारात्मक भूमिका मोडेल हुन सक्छ। यसमा हाम्रो युवा बोर्डको सदस्य हुनु भएको छ जसले संगठनको रणनीति र हाम्रो परियोजनाहरूको दिशालाई आकार दिन्छ। यो हामी धेरै युवाहरु को एक दान को रूप मा उत्तम अभ्यास को मानक स्थापित गर्दै छन् धेरै तरिका मध्ये एक हो।
यदि तपाईंले संसारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न हाम्रो दृष्टि र असीमित महत्वाकांक्षा साझा गर्नुभयो भने, कृपया सम्पर्कमा जानुहोस्। हामीलाई आफ्नो विचार र अनुभवको बारे बताउनुहोस्, चाहे तपाईं हाम्रो साथ गरिरहनु भएको कुरामा हाम्रो साथ काम गर्न चाहानुहुन्छ, वा हामी के गरिरहनु भएको कुराको लागि।
हामीलाई कल गर्नुहोस् - 0114 2999 210
हामीलाई इमेल गर्नुहोस् - hello@elementsociety.co.uk
पार्टनर र समर्थकहरू यसमा समावेश छन्:
EFL TRUST // NCS TRUST // CABINET OFFICE // शेफल्फ फ्यूचरहरू // ठूलो लटरी // ठीक छ // SHEFFIELD HALLAM // शैफिफिल्डको यूनिभर्सिटी